I-TimberWend yindawo entle yokubaleka enikezela ngendlela yokubaleka engenakuthelekiswa nanto. Umda weShenandoah National Park kwaye ujonge enye yeengxangxasi ezityelelwa kancinci kule paki, iGreasy Falls. Inombono omangalisayo wamashumi amahlanu eemayile ngosuku olucacileyo kwaye ummelwane osondeleyo kumgama wesiqingatha semayile.
Indlela eya eTimberWend iyisiqingatha semayile ubude kwaye ayilinywa ebusika. I-SUV iyacetyiswa. Kukho isango elitshixiweyo emnyango elinebhokisi yesitshixo. I-intanethi ifumaneka ngesitya sesathelayithi. Yinkqubo ye-5g ekufuneka ibonelele ngezantya ezaneleyo kwimisebenzi emininzi, kodwa inokuchatshazelwa kakubi sisimo sezulu kunye nokusetyenziswa kwesathelayithi ngobubanzi bebhendi ephezulu. Inkonzo yeselula iyafumaneka kubathengi be-AT&T ngokufowunela i-wifi. Kukho umnxeba womhlaba wonxunguphalo.
Oyena mmelwane wethu ukufutshane nesiqingatha semayile. Ihlathi ngummelwane wethu kwaye siyathanda ukuzola kwendawo. Ukuphumla kakhulu!
Siza kufumaneka ukuze sikuncede ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba unengxaki nceda uzive ukhululekile ukusitsalela umnxeba.